Nyochaa Kasamba - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Review nke Kasamba
Isi ihe Kasamba
Na-enye ọtụtụ ọrụ ndị na-adịghị adị ka Kabbalah, I Ching, na-agụ akwụkwọ AD, na ọbụna ụmụ anụ ahụ
Ọnụahịa na-amalite dị ka $ 1.99 kwa nkeji maka ụfọdụ ndị ndụmọdụ
The Kasamba ederede isiokwu blog nke ndị na-ahụ maka uche ha dere iji mara ha nke ọma
Ihe ngosi mmeghe pụrụ iche nke 50% kwụsịrị ịgụ akwụkwọ ọgụgụ isi mbụ gị
Na-enye refunds ma ọ bụrụ na achọrọ gị n'ime oge 72 nke ndụmọdụ gbasara ahụike ma ọ bụrụ na ị nweghị afọ ojuju
Nkọwapụta na nyocha nke psychics iji nyere gị aka ịhọrọ otu maka ịgụ
Na-enye ọrụ pụrụ iche ọ na-esighi ike ịchọta na ebe ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi, dị ka anụ ahụike anụ ahụ, ịgụ isiokwu, na ịkọwapụta ihe
Ọnụahịa dịgasị iche iche, ọnụego na-amalite dịka $ 1.99 kwa nkeji
Kasamba na-eme usoro ikpo okwu maka ndị na-agụ akwụkwọ na-agwọ ọrịa uche, na-enweghị usoro nyocha
Ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi na-agba ọsọ dị ka $ 19.99 kwa nkeji
Nkwado nkeji nkeji atọ dị oke mkpụmkpụ iji nwee ezi uche maka mmuta ma ọ bụ ọrụ
Nhọrọ nke Mkpụrụ obi
Kasamba na-enye usoro ikpo okwu maka nlekọta uche onwe onye, ​​ya mere ọ dịghị usoro nyocha. N'ezie, ha na-akwụ ụgwọ psychics ụgwọ iji sonyere. Site na nyocha akwukwo uche dika nke a, jiri nlezianya nyochaa nzaghachi na ogologo oge na-aga site na Kasamba. Ị nwere ike inwe obi ụtọ na ndị ọhụrụ, dị ọnụ ala psychics, ma ọ bụ ihe dị ize ndụ. E jiri ya tụnyere ụfọdụ saịtị ndị ọzọ, nke nwere iwu nlezianya nyochaa, nke a bụ nnukwu nnyocha.
Ịhọrọ Ezigbo Mkpụrụ Obi
Nchọpụta ha nyocha nwere ike ịmepụta psychics site na ọnụego na ọnụego, mana ọtụtụ ndị ọkachamara na-ejikọ aka na ụlọ ọrụ a, ọ nwere ike ịnweta ihe dị oke nfe na-eme nhọrọ. Kasamba etinyela nri na-agbakwunye ọhụrụ psychics, ya mere, olileanya na usoro nkenke nke okike ga-ewere ọnọdụ na ndị na-enye ndụmọdụ na-adịghị ike nke ndị isi ike.
Kasamba nwere saịtị ha nke ọma ka ha wee nwee ike ịchọta ebe ị chọrọ ileba anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ "ịhụnanya ịhụnanya" ị nwere ike ịhọrọ onye na-ahụ maka ịgba alụkwaghịm, ịlụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ma ọ bụ ọbụna ịgbagwoju anya. Ọ bụ ụzọ dị mfe isi kwụsị ọchụchọ gị.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ uche na-amalite na $ 1.99 kwa nkeji, ha nwere ike ịgba ọsọ dị ka $ 19.99 kwa nkeji. Kasamba na-enye oge atọ n'efu, mana ị ga-agwa gị ka ị kwado maka nkwalite dị mma, ebe ị ga-enwe ike ịgụ ihe na minit atọ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-agụ ogbi ga-ewe nkeji (ma ọ bụ karịa) iji chọpụta ụdị nduzi ị na-achọ, gbanwee kaadị ahụ, ma mee ya. Jide n'aka na ị ga - enwe nkwalite ebe ị nwere ike ịmara ọrụ ahụ na ọnụego kwesịrị ekwesị. A na-akwụ ọnụ ọgụgụ ọ bụla na ịgụ ọhụụ dị iche iche, ya mere. ị nwere ike ma jikọọ na paypal ma ọ bụ tinye nkọwa kaadị gị, a ga-ebo gị ebubo dị ka ihe ị na-eji.
Ụzọ Nkwurịta Okwu
Kasamba nwee ezigbo nkwukọrịta nhọrọ. Ọ bụ ezie na ụzọ nkwukọrịta dịgasị iche site n’echiche mmụọ, ị ga-ahụ ọtụtụ ekwentị, nkata, na nhọrọ email dị. Pụtara ị nwere ike ịhọrọ otu ị masịrị iji nata ọgụgụ gị.
Emeela nkwa na nkwụghachi
Ọ bụrụ na obi adịghị gị ụtọ na ị gụrụ akwụkwọ ọgụgụ isi, nyefee arịrịọ nkwụghachi ụgwọ n'ime awa 72 site na njedebe nke ịgụ. Ị na-eme nke a site na ịmecha "tiketi nkwado" na ụlọ ọrụ ngwọta ha. Ihe niile a chọrọ ka Kasamba kwadoro ya, mana ọ gaghị edo anya oge ole ọ ga - ewe.
N'inwe usoro mmụta uche dị iche iche na-enye ọpụrụiche dị iche iche na ọnụahịa dị iche iche, ị ga-ahụ onye dabara na mmefu ego gị na mkpa gị. Kasamba na-enye ụfọdụ niches ọhụụ, ma aghọwo otu n'ime ọrụ ọgụgụ isi kasị ọgụgụ isi na ụwa, na-elekwasị anya na ikwe ka psychics na-etinye onwe ha ọnụego ma na-arụ ọrụ azụmahịa onwe ya na nkwado nke otu nnukwu ụlọ ọrụ.